Gurgurtaa meeshaale Aadda addaa | | Awash Tenders
Gurgurtaa Meeshaale Aadda Addaa
East Harerge Jarso Woreda FEDB
Kallacha Oromiyaa Dec10,2020
Aadde Balaayinesh Caalaa mara jireenyaa dhuunfaa isaanii Magaalaa Biilaa ganda Olkeessaa qaban Aadde Gaaddisee Mangistuutti gurgurachuu waan barbaadaniif kan mormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee guyyaa 15 gidduutti haa dhiyaatu. Waajira Bulchiinsaafii Itti Fayyadama Lafa Magaalaa Bilaa Caalbaasii Ifaa marsaa 2ffaa Waajjirri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Jaarsoo bara baajetaa 2013 Waajjiraalee Aanicha keessatti argamaniif kan oolu
Uffata Seeraa hojjetaa
Gommaa Konkolaataa Gommaa Doqdoqqee
Jenereteroota Meeshaalee KBLTO caalbaasii ifaan bittaa raawwachuu Waan barabaaduruf eyyama seera qabeessa kan qabdanii fi Ulaagaalee kanaa gadii guuttan hundi akka irratti hirmaattan afeeramtaniitu.
1. Hayyama seera kan qabaniifi gibira bara 2011 kan kaffale,eyyama bara 2012 fi kan bara 2013 kan haareffate.
2. Galmaa’aa VAT fi TIN kan ta an.
3. Sanada caalbaasi poostaa orijinaalaafi koppii samiin saamsameen dhiyeessuu qabu.
4. Ragaa galmee dhiyeesitoota bittaa mootummaa iratti kan galmaa’an ta’uu qaba.
5. Dorgomtoonni gosa meeshaa irratti dorgoman sirritti beekuu qabu.
6. Dorgomtootni gatii keessan pirifoormaa mataa keessanii irratti guuttanii dhiyeefachuu qabdu.
7. Sanada caalbaasichaa Waajjira Maallaqaa fi Wal-ta’iinsa Dinagdee Aanaa Jaarsootti qarshii hin deebine 100.00 kaffaluun Adeemsa bittaa Bul/qabeenyaa kutaa lakk. 6 irraa bitachuu ni dandeessu.
8. Caalbaasiin kun qajeelfama bittaa M/N/O lakk. 2 bara 2004 bahee jiruun raawwatama.
9. Waajirri Carraa biraa yoo argate Caalbaasicha gartokkeenis ta’ee guutummaan guututti haquuf mirga ni qaba.
10. Caalbaasiin Kun guyyaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahee irraa eegalee Waliti fufiinsaan guyyoota hojii 15f qilleensa irra erga ture booda gaafa guyyaa 15ffaa sa’aatii 4:00 irratti Cufamee guyyuma kana sa’aatii 4:30tti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa jiranitti kan banamu ta’a. Guyyaan kun guyyaa ayyaana ykn cufaa yoo guyyaa hojii itti aanutti banamu ta’a.
11. Sanadi Caalbaasichaa haqaa laaqa yoo qabaate fudhatama hin qabu. Dorgomtoonni sanada caalbaasii isaanii irratti chaappaa fi mallattoo isaanii taasisuu qabu.
12. Uffata seeraa bitaman samuuda isaanii dhiyaateen ta’uu qaba. Waldaaleen IMX ni jajjabeeffamu. Odeefannoo dabalataatif Lakk. Bilbilaa 0573360497 fi 057336005 Waajjirri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Jaarsoo.